Wednesday February 24, 2021 - 12:24:35 in Wararka by Super Admin
Wasiirka batroolka nidaamka cabdi fataax Alsiisi ayaa socdaal kedis ah ku tagay magaalada Qudus ee ixtilaalka kujirta wuxuuna halkaas kula kulmay Benyamiin Netenyaahu R/wasaaraha Yahuudda.
Ninka dabadhilifka ah ee lagu magacaabo Daariq Almulla oo farriin ka siday Alsiisi ayaa tagay Qudus arrinkaas oo loo fasirtay in nidaamka Masar ka jira uu magaaladan u aqoonsanyahay caasimadda Yahuudda.
inta badan madaxda iyo wasiirrada dowladaha marka ay booqanayaan waxa loogu yeero israa'iil waxay tagaan magaalada Talaabiib halkaas oo ay kula kulmaan madaxda Yahuudda balse hab dhaqanka dowlada Masar ayaa arrinkaas ka duwan waxayna u egtahay in ay Qudus u aqoonsantahay caasimadda Yahuudda.
R/wasaaraha Yahuudda iyo golihiisa wasiirrada ayaa udabaal degay imaashiyaha wasiirka Masaarida ee magaalada qudus waxayna ku tilmaameen guul muujinaysa in dowladaha carabta ay aqbaleen qaraarkii uu Trump caasimadda yahuudda ugu aqoonsaday Qudus.
Wasiirka batroolka nidaamka Alqaahira ayaa warbaahinta u sheegay in socdaalkiisu uu salka ku hayay sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiis dhanka tamarta ah oo ay horay ula galeen yahuudda sahyuuniyadda
Dowladda Suudaan oo ku dhawaaqday in ay dhaqan gelinayso hanaanka calmaaniyadda.